AFG Caravelle Usizo sicela
Umbuzo AFG Caravelle Usizo sicela
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #568 by calypso999
Engangikuthanda flying AFG Caravelle e FS9.
Ngithole isiza sakho ngabona i-Caravelle. Ngaphandle kokusho, ngiyithathile ngayifaka FSX I-Steam lapho nginezindiza eziningi eziyinkimbinkimbi (PT Tu-154B2, DC-9, njll).
Ukufakwa kwahamba kahle futhi kungakapheli sikhathi, ngase ukuthi elidala ajwayelekile Caravelle iphaneli ukulayishwa.
Ngokuyinhloko izinkinga ezimbili Nokho.
Izinjini senqabe ukuqala kahle. Bayoba ukufinyelela RPM ezithile futhi lapho ngivula ekuqaleni valve le revs hlala khona lapho. Ayikho isiqalo.
Angikwazi enezinto yami ukusebenza. Ayikho ukunyakaza phezu enezinto gauge futhi akukho ukuhamba enezinto ngokwabo.
Ngingajabula ngempela esibonga nganoma yiluphi usizo / iziphakamiso.
Ngizizwa sengathi inkinga iphaneli / gauge kimi. Noma ikuphi ku Steam kokuba nesimo esifanayo please25?
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-7 ezedlule calypso999.
Isikhathi ukudala page: 0.147 imizuzwana